Mas'uuliyiinta sare ee dowladda federaalka oo si weyn uu doonaya in Sheekh Adan Madoobe loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka iyo 9 ka mid ah 12ka mas'uul ee maamulka maaliyadda Kismaayo oo ay isku beel yihiin madaxweynaha Soomaaliya. Ruunkinet 30/01/07
Wararka ka immaanaya magaalada Baydhabo ayaa ku waramaya in madaxweynaha iyo ra'isul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay si weyn u doonayaan in loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka mudane Sheekh Adan Madoobe oo si weyn u taageersan joogitaanka ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in ay jiraan mas'uuliyiinta sare ee dowladda oo ku bixinaya dhaqaale si loo doorto Adan Madoobe.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyaan in ay inta badan uruursato dad aan aqoon lahayn balse daacad u ah ammarradooda.
Sidoo kale, Saalim Caliyow Ibrow oo ka mid ah 11 mudane ee doonaya in ay u tartamaan jagada lagu muransan yahay ee guddoomiyaha baarlamaanka ayay dad badani sheegayaan in laga yaabo in uu ku guuleysto jagadaasi.
Dhanka kale, 9 ka mid ah 12 mas'uul ee loo magacaabay maamulka maaliyadda ee magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in ay yihiin dad ay isku beel yihiin madaxweynaha Soomaaliya Col. Cabdullahi Yuusuf.
Sidoo kale, mas'uuliyiinta ugu sareysa ee dhinaca ciidamada iyo maamulka ayaa la sheegay in ay intooda badan qaraabo yihiin madaxweyne Cabdullahi Yuusuf.